» जेष्ठ २९ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ? हेर्नुहोस ॐ ॐ शेयर गर्नुहोस् । ॐ ॐ गणेश भगवानले सबैको रक्षा गरुन् जेष्ठ २९ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ? हेर्नुहोस ॐ ॐ शेयर गर्नुहोस् । ॐ ॐ गणेश भगवानले सबैको रक्षा गरुन् – हाम्रो खबर
जेष्ठ २९ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ? हेर्नुहोस ॐ ॐ शेयर गर्नुहोस् । ॐ ॐ गणेश भगवानले सबैको रक्षा गरुन्
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल जेष्ठ २९ गते शनिबार इश्वी सन २०२१ जुन १२ तारीख जेठ शुक्लपक्ष द्वितीया तिथी आद्रा नक्षत्र गण्ड योग पश्चात वृद्धि योग कौलव करण चन्द्रमां मिथुन राशिमा आ’नन्दादि योगमा मु’द्गर योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतु ,बा’लश्रमविरुद्ध दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)राशि नक्षत्रहरूको एउटा घे’रा अथवा समूह हो जसको माध्यमबाट सूर्य, चन्द्रमा, र ग्रह आकाशमा पारगमन गर्छन । ज्योतिषहरूले यि नक्षत्रहरू माथि ध्यान दिए र यिनलाई केही विशिष्ट महत्त्व दिए । समय संग-संगै उनीहरूले बारहौं नक्षत्रहरूको विशिष्टताहरूलाई ध्यानमा राखेर त्यसमा आधारित बारह राशिहरूको एक प्रणाली बनाए ।
राशीहरू मूलतः काल्पनिक तारापुञ्जहरू हुन् । सूर्यले पृथ्वीको वरिपरि ब्रह्माण्डमा घुम्ने बाटो वृत्त (वास्तवमा केही दीर्घवृत्त) ३६० डिग्रीको हुन्छ । यसलाई १२ भागमा विभाजन गरिएको छ, प्रत्येक ३०/३० डिग्रीको। यो ३० डिग्रीभित्र जुन नामको तारापुञ्ज पर्दछ, त्यो राशी भनेर जानिन्छ।यी राशीहरू हुन् – मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ र मिन। एकमा मेष र एवम् क्रमले बाह्रमा मिन। यिनीहरूले मोटामोटी रूपमा यिनै शब्दहरूले सङ्केत गरेका तारापुञ्जको आकारलाई निर्देशित गरेका हुन्छन् – मेषको मतलब भेँडा, वृषको मतलब साँढे आदि। अनि त्यस्तै ग्रहहरू भए सूर्य, चन्द्र, बुध, शुक्र, मङ्गल, वृहस्पति र शनी – जम्मा सात। यीबाहेक पूर्वीय ज्योतिषमा दुईवटा काल्पनिक ग्रहहरू राहु र केतुलाई पनि छन्। यिनीहरू वास्तवमा चन्द्र कक्ष र सूर्य कक्ष काटिएका विन्दुहरू हुन्, भौतिक ग्रहहरू होइनन्। त्यसैले जहिले पनि यिनीहरू परस्पर विपरित दिशामा रहेका हुन्छन्।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । सामान्य आम्दानि हुने योग रहेको छ । कार्य सम्पादनमा बिभिन्न समस्याका कारण ढिलाई रहन सक्छ । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । कार्य सम्पादनमा भएका सामाय त्रु’टिले अ’पज’सको सा’मना गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।-ताजा खबर बाट